အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူနှင့်အတူလက်ကား Professional Long Coat Pet Conditioner |Skylark
ဖုန်း : +86 18908183680
စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော Professional Long Coat Pet Conditioner
ထုတ်ကုန်သည် အကြွင်းအကျန်များကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဆေးကြောနိုင်ပြီး အရေပြားအတွင်းပိုင်းထိ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး ချောမွေ့ခြောက်သွေ့ကာ ဆံသား၏ အစိုဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွဲ, လက်လီရောင်းချသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူအရည်အသွေးမြင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် သန့်ရှင်းရေးနှင့် စောင့်ရှောက်မှု ထုတ်ကုန်များ။သင့်လိုအပ်ချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ Logo ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိရောက်သော၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ စုစည်းထားသော ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါသည်။
ကုတ်အင်္ကျီရှည် ကြောင်များနှင့် ခွေးမျိုးစိတ်များ
ကုတ်အကျီရှည် ကြောင်များနှင့် ခွေးများကို ရေချိုးရန်။
BOURENA Long Coat Pet Conditioner သည် အရောင်ဆိုးဆေး၊ ဆီလီကွန်ဆီမပါဘဲ EU စံနှုန်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် "အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဗဟိုပြု" အကောင်းဆုံး ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန်သည် အကြွင်းအကျန်များကို သေချာစွာဆေးကြောနိုင်ပြီး အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမွေးများကို ပျော့ပျောင်းစေခြင်းမရှိဘဲ ချောမွေ့ခြောက်သွေ့စေပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းအက်ကြောင်းများကို ပြုပြင်ရန်နှင့် ဆံသား၏ အစိုဓာတ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် stratum corneum အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည်။
1. BOURENA အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခေါင်းလျှော်ရည် BOURENA အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခေါင်းလျှော်ရည် သို့မဟုတ် အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခေါင်းလျှော်ရည်ကို အသုံးပြုပြီးနောက် အသုံးပြုသင့်သည်။
2. Conditioner နှင့် ရေကို 1:8 အချိုးဖြင့် နို့ရှိတ်တစ်ခုထဲသို့ ရောမွှေပြီး သင့်လက်ဖဝါးပေါ် လောင်းချပါ။
3. ပျော့ဆေးကို ဆံပင်ပေါ် တိုက်ရိုက် လိမ်းပြီး3မိနစ်ခန့် လက်ချောင်းများဖြင့် ဆံပင်ပေါ် လိမ်းပေးပါ။
4. ခေါင်းလျှော်ရည် အကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားရန် ရေနွေးနွေးဖြင့် ဆေးကြောပါ။
5. သင့်ဆံပင်ကို ပုံမှန်ပုံစံအတိုင်း အခြောက်ခံပါ။
ဤထုတ်ကုန်ကို BOURENA အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့် အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားပါသည်
● အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှ အကြွင်းအကျန်များကို လျှာဖြင့် သို့မဟုတ် မျက်လုံးနှင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ရေချိုးသောအခါ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်ကို လုံးဝသန့်ရှင်းပေးပါ။အကြွင်းအကျန်များကို အလွန်အကျွံ လျှာဖြင့် ပွတ်ခြင်းသည် အစာခြေလမ်းကြောင်းကို ယားယံစေကာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ ခြောက်သွေ့သော အရေပြားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မေး- ထုတ်ကုန်နှင့် ထုပ်ပိုးမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကို ရနိုင်ပါသလား။
Q: နမူနာအချို့ကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ယခင်- စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော Professional Short Coat Pet Conditioner
နောက်တစ်ခု: စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ရေပိုက်အေးဂျင့်
Excell ဖြင့် Professional Pet Coat ချောမွေ့သော အရည်
Excell ဖြင့် Professional Short Coat Pet Shampoo...
Professional Pet Coat Color Care Shampoo နှင့် E...
Excelle ဖြင့် Professional Long Coat Pet Shampoo...
Ex နှင့်အတူ Professional Short Coat Pet Conditioner...
Excell ဖြင့် Professional Pet Foot Cleaning Foam...